Root ho an'ny Sony Xperia Z | Androidsis
Androany avy amin'ny Androidsis dia manome anao ny fomba hamongorana ny vaovao Sony Xperia ZAorian'izay dia hanavao ny lahatsoratra amin'ny fomba fametrahana famerenana amin'ny laoniny izahay, satria amin'izao fotoana izao dia tsy misy amin'ny fomba milamina. Ity fampianarana ity dia natao ho an'ny voahidy bootloader ary ilaina izany misy firmware farany.
Andao aloha handeha amin'ny zava-dehibe, Inona no atao hoe miorim-paka finday? Ny rafitra Android mazàna nohidiana amin'ny fomba izay tsy ahafahantsika mikasika ny 'fakany'. Ny fakany dia manome antsika fidirana amin'ireo faka ireo mba hahafahantsika manova ny rafitra fiasa araka izay tadiavintsika (Miaraka amin'ny fikarakarana MAFY hatrany). Amin'ny ankapobeny dia toy ny hoe tonga tao aminay ny Microsoft Windows niaraka tamin'ny lahatahiry 'C: Windows' ka tsy afaka mikasika azy isika ary miditra ao aminy.Hanazava ireo dingana tokony harahina izahay izao faka ny Sony Xperia Z miaraka voahidy bootloader.
Manana ny firmware farany
File ho an'ny faka
Misintona ilay rakitra izahay
Hesorinay izy io ary ampandehaninay ny rakitra RunMe.bat
Safidintsika ny safidy laharana faha-3
Mampihetsika ny USB Debugging amin'ny Xperia Z izahay
Rehefa mangataka anay izy hampifandray ny Xperia amin'ny solosaina dia ampifandraisinay izany
Amin'ny finday dia ho hitantsika ny safidy hamerenana kopia nomaniny ho solon'izay ary hanaiky sy hamerina azy izahay
Hiverina indray ny Xperia Z ary halam-paka izy ireo.
Ity fampiharana manaraka ity
Manokatra ny fampiharana ao amin'ny Xperia Z izahay
Mametraka azy izahay
Hiseho ny menio iray rehefa manokatra ny fampiharana isika ary misafidy Install Recovery
Rehefa apetraka dia tsy maintsy manomboka fotsiny isika ary vonona dia apetraka ny fanarenana
Raha hiditra amin'ny fanarenana dia manandrama hetsika roa: Ny iray amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra ambony raha toa ka mitodika ny led ary ny iray kosa amin'ny fikasihana hatrany ny efijery.
Fanazavana fanampiny - Ampidiro ny Sony Xperia Z anao, Rakibolana Android, Ankizivavy tsara tarehy manandrana ny Xperia Z,
Fampidinana - File ho an'ny Root, Fangatahana fanarenana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Xperia Z, Root ary fanarenana
sammy zuleyman dia hoy izy:
Salama, araka ny fantatrao dia namoaka fanavaozana vaovao i Sony mba hahitana ny fahafatesany tampoka. 10.1.A.1.434, ny fanontaniako dia raha miaraka amin'ity paozy navoakan'izy ireo ity dia azo atao ny mamaka satria efa novakiako tamin'ny seha-pifanakalozan-kevitra hafa fa tsy miasa afa-tsy amin'ny fomba fijery fotsiny. 10.1.A.1.350, misaotra betsaka mialoha
Mamaly an'i sammy zuleyman
Izy io koa dia mandeha, havaozina izy io mba hahafahany mamaka azy amin'ny firmware farany
Victor, misaotra noho ny valiny haingana, izao ny fanontaniako dia ahoana no ahafantarako raha manana bootloader mihidy na voasakana aho? Novidiko maimaim-poana tamin'ny telefaona tany China ny finday na misy fomba hafa na ity dia mandeha koa,
miala tsiny amin'ny fanontaniana be dia be fa vao nividy azy aho vao haingana ary te-hanavao azy, misaotra indray
Raha maimaim-poana izy ireo dia tsy maintsy manana ny bootloader izay azo vohana. Na eo aza izany, apetraho ny * # * # 7378423 # * # * ary mandeha amin'ny fampahalalana momba ny serivisy ianao ary tokony hiseho izany Unlock Bootloader Avelao = Eny
Nahavita nanao ny dingana voalohany aho rehefa afaka namerina azy io, mangataka kaody amiko izy ary tsy avelako hanome azy io amin'ny laoniny, inona koa no azo atao amin'ny tranga misy ahy
Kaody? Tsy azo atao ny mangataka anao kaody momba izany dia avereno indray.
Salama, misaotra anao mamaly, efa nandramako ny maraina, raha tapitra io teboka io, tonga amin'ny teboka video aho niandry ny telefaonan'ny telefaona ary tafaverina amin'ny laoniny ary tsy misy na inona na inona, tsy misy na inona na inona, mijanona miaraka amin'ny loko ihany izy io efijery ary tsy misy na inona na inona. Fantatro raha noho ny Windows 8 na dia miahanahana aza aho fa tsy misy na inona na inona tsy alefa indray ny telefaona
Nalefa tamin'ny findaiko Sony Xperia ™
Eny, tsy nisy ny tsy fahombiazana notaterina toy izao, manandrama port USB hafa na solosaina hafa
Salama Victor, azafady azafady fa mavesatra be izany, ok ary misaotra ny sainao. Eny, nanova solosaina tamin'ny Windows 7 aho ary tonga lafatra ny zava-drehetra. Natomboka indray ny telefaona ary toa niasa tsara ilay programa, saingy azoko atao, toa tsy haiko loatra izany. Tsy manao na inona na inona ao amin'ny terminal satria amin'ny fikirakirana ny mombamomba ny serivisy dia mahazo ireto fanombohana miorim-paka manaraka ireto aho: avelao ny hamaha bootloader: Tsy mino aho fa mbola rootjoder nandinika tontolo andro aho ary tsy nisy.
Lohahevitra: [androidsises] Re: Xperia Z, Root ary fanarenana
Ny hoe faka dia tsy midika hoe mamoha ny bootloader. Raha faka ianao dia nametraka ny superSU. Esory ao amin'ny Google Play ny root checker ary zahao izy
Mamelà ny tsy fahalalako fa manana iphone 4 aho ary ity ho ahy dia tontolo vaovao fialantsiny arivo ary efa miorim-paka aho raha efa nilaza tamiko ianao fa raha izao no ahafahanao mametraka roons masaka dia tsy toy izany ary ho an'izay aho mila mametraka zavatra hafa hahasitrana ahy ary somary misavoritaka ihany aho
Amin'ny alàlan'ny fanakanana ny bootloader dia tsy afaka mametraka roma masaka mifototra amin'ny voan-kazo ihany ianao, noho izany dia mila mametraka sitrana ianao, milaza aminao ny zavatra rehetra ao amin'ilay lahatsoratra
alfredoqualtia dia hoy izy:
salama namana miasa ho an'ny xperia zl ???? jerena
Mamaly an'i alfredoqualtia
Salama aho dia nanandrana nanaraka ny tutorial fa rehefa mampifandray ny finday amin'ny solosaina rehefa angatahan'ny programa izany dia tsy mivoaka ny safidy hamerenana ny backup, manana ny maody debugging USB aho saingy tsy manao na inona na inona ary ny runme.bat mijanona ao amin'ny mampifandray ny telefaona aho fa tsy misy n'inon'inona, raha misy manana ny heviny hoe maninona no mety ho izy dia tiako raha omena tanana aho. Novakiako fa mijanona ny fiasan'ny nfc, fantatrao ve raha izany ary raha azo vahana? Misaotra anao
Tsy misy ilana azy izany raha tsy nesorinao ny bootloader
blackracor dia hoy izy:
Ho an'ireo izay tsy afaka na tsy nandao ny telefaona dia voavaha ho ahy izany
famerenana ny firmware amin'ny programa sony (orinasa pc tsy) ilay anananao
Ny rohy an'ny programa dia nomen'ny tranokala vodafone ahy
Vantany vao vita aho dia faka ary mametraka superuser (tsy supersu)
Ny fampirimana dia tsy maintsy apetraka ao amin'ny faka C: / fampirimana anarana raha tsy manome ny lesoka izy dia tsy hitany fa tsy fantatro izay port 5037
Nataoko tamin'ny Windowsxp tamin'ny w7 tsy vitako izany
Mamaly an'i blackracor
pacozx97 dia hoy izy:
Afaka misafidy supersu na superuser aho izay nofidiko
Mamaly an'i pacozx97
Salama, manana olana aho, mandeha tsara ho ahy ny zava-drehetra mandra-pahatongany amin'ny fanosehana ny supersu ap izay mijanona miandry ny fitaovana ary tsy fantatro izay tokony hataoko mba hanohizana.
Mark Flores dia hoy izy:
azo atao amin'ny android 4.4.4
Valiny tamin'i Mark Flores
Fanatsarana vaovao ao amin'ny lozisialy LG Optimus G pro